एम्बुलेन्स् वालीसँग एक दिन: मिलन लामा दाेङ
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ को निरन्तर रिपोर्टिङको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग भौतिक दुरी कायम गर्दै भेट्ने अवसर मिलेको थियो ।
कोभिड- १९ को बारेमा जनतालाई सचेतना जगाउनका लागि निरन्तर रिपोर्टिङकै क्रममा एक जना मित्रसँग मेरो सामाजिक संजालमा संवाद हुन थालेकोथियो । उहाँ पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले कोरोना भाइरसको बारेमा बढी संवाद हुने गर्दथ्यो ।
लकडाउनको करिब ५५ या ५६ औं दिनमा उहाँले मलाई एक जना बहिनीको अन्तरवार्ता लिनका लागि मलाई करिव साँझको ८ बजे तिर सामाजिक संजाल मार्फत अनुरोध गर्नुभयो । मैले उहाँको विगत र वर्तमानको बारेमा बुझ्दै गएपछि अन्तरवार्ताका लागि म तयारी भएँ।
एक दिन मलाई एक्कासी अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । “दाई यता कतै खाना बाँड्ने ठाउँ छैन ?” एकछिन त म अक्मकिएँ ।
उनले फेरी बोलिन् “मलाई चिन्नु भएन । म लक्ष्मी थापा मगर । राममाया वाइवाको साथी । उहाँले नै दिनुभएको तपाईको नम्बर ।”
मैले उहाँलाई सरकारले सामुहिक खाना वितरण गर्ने सबै कार्य बन्द गरिसकेको हुनाले अहिले कतै नपाउने जानकारी दिएँ । तर मेरो मनले मानेन । एक मनले सोचचेँ घरमा नै बोलाएर खाना खुवाइ दिउँ । म आफैँले नचिनेको मान्छे कसरी रातको समयमा कोठामा बोलाउने ? मैले केहि निर्णय गर्न सकिन । फेरि उनीले नै फोन गरेर भन्दै थिइन् “दाई म बनेपा नै गएँ । मेरो रेष्टुरेन्ट छ । म त्यहीँ बस्छु ।”
त्यो रात साँच्चिकै भन्ने हो भने मलाई राम्रोसँग निन्द्रा नै लागेन । एक महिला, एक एम्बुलेन्स चालक । जो कोरोनाको समयमा एम्बुलेन्स चलाएर सेवा गरिहेको छ । मैले मनमनै सलाम गरे ती नारीलाई ।
करिव रातको दश बजे मेरो सामाजिक संजालको म्यासेन्जरबाट जानकारी पाएँ । “सर लक्ष्मीलाई त छिमेकीहरुले कहाँ, कताबाट भनेर सोधेर हैरान पारिहेको छ रे ।”
म्यासेज हेरेर मनमनै अचम्म मानीरहेँ ।
भोलिपल्ट मैले लक्ष्मी थापा मगरलाई संवादका लागि सारा खबरको अफिसमा बोलाएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी राममाया वाइवाले खाना लिएर आइपुगिन् ।
करिब दिनको १२ बजेको थियो होला । लक्ष्मी भोकै रहेछ ।
साँझको पाँच बजेको थियो । एम्बुलेन्स चालक लक्ष्मी थापाको फोन थियो ।
“दाई तपाईँ आएर मलाई बचाइ दिनु पर्यो । मलाई त यहाँ छिमेकीहरुले बस्न नै नदिने भयो म के गर्ने होला ?”
उनले रुँदै फोन गरेको मलाई अहिले जस्तो नै लागिरहेको छ ।
सारा खबरको फोटो पत्रकार पेमा दोङ र म हावाको बेगमा काठमाडौँको नयाँ बाँनेश्वर स्थित बुद्वनगरमा पुग्दा घटनाको दृश्य साँच्चिकै मन रुवाउने नै थियो ।
एम्बुलेन्सबाट कोरोना सर्छ भन्दै कराइ -कराइ विरोध गर्नेहरुको सामु नेपाल पुलिस पनि नतमस्तक नै थियो ।
अवरोध मिलाउन खटेका प्रहरीले नजिकैको निजी अस्पतालमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो तर मनमोहन अस्पतालले गाडी पार्कीङ र बस्नेको व्यवस्था गरिदिने भनेपछि एम्बुलेस लिएर हामी पनि स्वयम्भुमा आयौँ ।
स्वयम्भुमा रहेको मनमोहन अस्पतालका डाक्टरहरुले एम्बुलेन्सबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन यसबारे बोल्न नै चाहेनन् ।
मेरो प्रश्न अहिले पनि अधुरो नै छन् । के साँच्चिकै एम्बुलेन्सबाट कोरोना सर्छ ? तर दुखद खबर त के रह्यो भने हामी हिँडेको केहि समयपछि मनमोहन अस्पतालमा पनि एम्बुलेन्स राख्न दिएनछ।
बनेपामा पुगेर “दाई मलाई त मनमोहनमा पनि बस्न दिएन । बेनपामा आएर बसेको छु । समाचारमा यही लेख्नु होला ।”
एम्बुलेन्स चालक लक्ष्मी थापा मगरले रुँदै फोन राखिन् ।
मेरो एकदिन एम्बुलेन्स वालीसँग यसरी नै वित्यो । म अहिले पनि सोच्छु । नेपालमा एम्बुलेन्स चालकहरु प्रति यस्तो व्यवहार गर्ने हो भने साँच्चिकै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको दिन के होला ?
यो प्रश्नको जवाफ मैले कुनै दिन त पाउँछु होला । अहिलेलाई एम्बुलेन्स वाली सँगको सम्वाद हेर्न नभुल्नु होला ।
Tags: 100 dollar bill, ebay motors
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङ्ग समक्ष संघका अध्यक्ष मन्सुरीले ध्यानार्कषणपत्र
रुकुम घटनामा बेपत्ता अर्का एक युवककाे शव १० दिनपछि भेरी नदीमा भेटियो